(src)="1.1"> Tontolo : Iray Andro Eto An-Tany - 10.10.10
(src)="1.2"> Ny tetikasa One Day on Earth , izay andro iray ahafahan ’ ireo olona maneran ’ izao tontolo izao manao horonantsary , ary mandefa izany mba ho anisan ’ ireo horonantsary fanadihadiana sy fahalalàna maneho indray mipika ny toetoetran ’ ny olombelona .
(src)="2.1"> Nisoratra anarana ireo olona maneran-tany mba hitondra ny anjarany amin ’ ity ezaka ity , ka namorona na nirotsaka anatina 'ny iray amin 'ireo vondron ’ olona izay mitontaly 495 , izay tsy mitsahatra mitombo manodidina ity hetsika ity : ao ireo mbola ho ray aman-dreny , ireo efa manambady , ireo mpampianatra , na koa sokajy mikasika toerana na firenena voafaritra .
(src)="2.2"> Na dia efa mahatratra 10000 aza ireo nisoratra anarana dia misy ihany ireo firenena izay vitsy mpandray anjara amin ’ ity hetsika ity ka manentana hatrany ny tsirairay mba hirotsakla na hanasa ny hafa monina amin 'ireo firenena ireo ny mpikarakara mba hanatevin-daharana sy handray anjara amin ’ ity hetsika ity .
(src)="8.1"> Mbola tsy tara raha izao vao hisoratra anarana sy handray anjara amin ’ ny hetsika ; ary Matt Lambert avy amin ’ ny bilaogy Motionographer dia mamintina am-pitsikina ny ho mety ho valin ’ ny soritrasa :
(src)="8.2"> Ny valin ’ ity soritrasa ity dia ho tahiry-na horonantsary iray- azon ’ ny mpandray anjara sintonina avy ao amin ’ ny tranonkala ka ampiasaina tsy hitadiavam-bola fa ho ampiasaina amin 'ny asa famoronana sy fampianarana - horonantsary iray asongadina , ary vondron ’ olona mpamorona sarimihetsika sy ireo mponina liana hizahà ny maha olona antsika amin ’ ny ankapobeny amin ’ ny alàlana hetsika fampitam-baovao ifampizaràna .
(src)="8.3"> Na izany aza , araka ity sombin-tsary ity , raha te hanararaotra an ’ ity harem-pahalalàna ity ianao dia mila mampiditra sangan ’ asa maharitra iray minitra nalaina ny andron 'ny 10.10.10 .
(src)="8.4"> Aza avela mandalo àry ny vintanao !
(src)="1.1"> Azia Atsimo atsinanana : Mitoraka bilaogy momba ny baolina kitra
(src)="1.2"> Sarin 'i Nhy Nguyen avy amin 'ny pejy Flickr nampiasàna ny CC License Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
(src)="2.1"> Betsaka ireo bilaogy mikasika ny baolina kitra any Azia Atsimo atsinanana izay manome vaovao lehibe farany sy ara-potoana mikasika ireo lalao baolina kitra sy ny fandaharam-potoana any amin 'ny faritra .
(src)="2.2"> Tamin 'ny alalan 'ny mailaka , niresadresaka tamin 'i Erick Bui avy amin 'ny baolina kitra any Vietnam ny tenako sy i Chamroeun ao amin 'ny Football Roubroum any Kambodza mikasika ny fitorahana bilaogy mikasika ny baolina kitra any Azia Atsimo atsinanana .
(src)="3.1"> Nilaza fohifohy mikasika ny tantaran 'ny baolina kitra any Vietnam i Erick .
(src)="4.1"> Tsy azo iadian-kevitra fa ny baolina kitra no fanatanjahan-tena matanjaka sy be mpanohana indrindra any Vietnam .
(src)="4.2"> Nanomboka tamin 'ny taona 1980 ny fifaninana V-League isan-taona .
(src)="5.1"> Tamin " i Vietnam nizara roa ho lasa Vietnam Avaratra sy Vietnam Atsimo , dia nanjary nisy ekipa roa ihany koa ... Taorian 'ny nikambanan ' i Vietnam tamin 'ny taona 1975 , nijaly ela tsy nivoatra mihitsy ny baolina kitra Vietnamiana .
(src)="5.2"> Tamin 'ny taona 1991 no niatrika lalao iraisam-pirenena voalohany indrindra ny ekipam-pirenena Vietnamiana .
(src)="5.3"> Nanao ezaka lehibe mihitsy ny baolina kitra Vietnamiana nanomboka tamin 'izay .
(src)="5.4"> Amin 'izao fotoana izao dia iray amin 'ireo tsara indrindra eo amin 'ny faritr 'i ASEAN ny ekipam-pirenena Vietnamiana sy ny V-League .
(src)="5.5"> Milaza ny antony itazonany ny bilaogy amin 'ny teny Anglisy mikasika ny baolina kitra any Vietnam i Erick .
(src)="5.6"> Mifanohitra amin 'ny hamaron 'ny isan 'ny tranonkala mikasika ny baolina kitra amin 'ny teny Vietnamiana , vitsy ihany ireo tranonkala amin 'ny teny Anglisy mikasika ny baolina kitra eo an-toerana ao amin 'ny aterineto .
(src)="5.7"> Izany no antony nahatonga ahy nanomboka ny bilaogy mikasika ny baolina kitra any Vietnam mba hanampy ny olona hahalala kokoa mikasika ny baolina kitra eo amin 'ny fireneko .
(src)="5.8"> Manana namana maro any am-pitan-dranomasina aho izay mpankafy baolina kitra ihany koa .
(src)="5.9"> Matetika izy ireo no manontany ahy mikasika ny baolina kitra Vietnamiana satria hitan 'izy ireo fa sarotra ny mahita vaovao amin 'izany .
(src)="5.10"> Eo am-pijerena izany zavatra izany dia nihevitra aho fa ho rohy lehibe hampifandray an 'i Vietnam amin 'izao tontolo izao ny bilaogy mikasika ny baolina kitra amin 'ny teny Anglisy .
(src)="5.11"> Sady tena tia aho no manana ny fahaizana ilaina mikasika ny baolina kitra ka dia mahafinaritra ahy ny mitoraka bilaogy momba ny baolina kitra Vietnamiana .
(src)="5.12"> i Chamroeun no Kambodjiana voalohany mpitoraka bilaogy mikasika ny baolina kitra .
(src)="5.13"> Ao anatin 'ny bilaoginy , Cambodia Football Roubroum , mizara ny vaovao mikasika ny lalao baolina kitra any Kambodza izy
(src)="6.1"> Tamin 'ny volana Jolay 2008 no nanaovako ny bilaogiko manokana .
(src)="6.2"> Ny hanaparitaka ny vaovao mikasika ny baolina kitra Kambodjiana no tena tanjoko .
(src)="6.3"> Hitako ihany koa fa manana tetikasa tsaratsara kokoa mikasika ny baolina kitra ireo firenena roa mpiray vodirindrina amintsika , Thailand sy Vietnam .
(src)="6.4"> Tsara karama ireo mpilalao .
(src)="6.5"> Nefa any Kambodja , tsy feno tsara ny fepetra ho an 'ireo mpilalao baolina kitra .
(src)="6.6"> Milalao maina na kely karama ny ankamaroan 'izy ireo .
(src)="6.7"> Na izany aza , niova be ny baolina kitrantsika tao anatin 'ny dimy taona .
(src)="6.8"> Amin 'izao isika efa manana ligy matihanina izay tohanan 'ny orinasa Vietnamiana iray .
(src)="6.9"> Mifandray amin 'ny bilaogy hafa miresaka baolina kitra ao amin 'ny faritra ihany koa i Erick sy i Chamroeun .
(src)="6.11"> Mifandray amin 'ireo tranonkala mikasika ny baolina kitra eo an-toerana ihany koa ireo bilaogy ireo .
(src)="7.1"> Miresaka mikasika ny filokana eo amin 'ny fanatanjahan-tena izay tena olana goavana any Malezia nandritra ny volana vitsivitsy izao i Haresh Deol , ilay mpitoraka bilaogy mamahana ny bilaogy Foul from Malaysia .
(src)="8.1"> Sakanan 'ny antoko maro ny resaka fampanarahan-dalàna ny filokana eo amin 'ny fanatanjahan-tena .
(src)="8.2"> Tsy mahasoa ny rehetra ny filokàna volabe – na ho an 'ny maro an-isa na vitsy an 'isa .
(src)="8.6"> Rehefa tsy mahasoa dia tsy mahasoa .
(trg)="20.2"> အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ၊
(src)="8.7"> Fa rehefa fomba tsara kosa ny fanaraha-maso ny fandehan 'ny Ringgit-ntsika ( tenin 'ny mpanoratra : sandam-bola Maleziana ) sy ny loharanon 'ny fidiram-bola ho an 'ny governemanta , dia tsy maninona ?
(src)="1.1"> Azia Atsimo : Mifanakalo resaka ny olan 'ny rano ireo mpitoraka blaogy
(src)="1.2"> Blog Action Day dia hetsika fanao isan-taona isaky ny 15 Oktobra izay iarahan 'ny mpitoraka blaogy manerantany manoratra mikasika olana iray iraisana amin 'ny andro iray mitovy .
(src)="1.3"> Tamin 'ity taona ity dia ny " rano " no foto-kevitra .
(src)="1.4"> Maromaro ihany koa ireo mpitoraka blaogy avy any Azia Atsimo no nandray anjara tamin 'ity hetsika ity .
(src)="1.5"> Ndeha hojerena izay nosoratan 'ny saany amin 'izy ireo .
(src)="2.2"> Sary avy amin 'ny pejy Flickr an 'i mckaysavage .
(src)="3.3"> Any avaratr 'i India no teraka ny rano .
(src)="3.5"> Ny Avaratra-Andrefan 'i India dia tany efitra tsy misy rano .
(src)="3.6"> Ary ny atsinanan 'i India kosa manana ny rotsak 'orana avo indrindra izay tsy manampy na iza na iza .
(src)="4.1"> Ary ambonin 'izany , ao anatin 'ny ozon 'ny rano any India ny fanapoizinana , tsy fahampiana , fandàvana , fanaovana risoriso , olan 'ny fitaterana , fahazoana izany , fahafatesana sy aretina , fahalotoana , ny foroboroboan 'ireo orinasa tsy mahatsiaro ny andraikiny nefa miankin-doha amin 'ny rano , sy ny maro tsy voatanisa .
(src)="4.2"> Adinontsika ireo fomba fiainantsika tamim-pahaizana izay nampiasàna fa tsy norobarobàna tamin 'ireo loharano natoraly tahaka ny rano .
(src)="4.3"> Tsy nisy fidiovana tsy manam-petra izany , famanàn-drano , fetin 'ny orana , na siniben-drano mba hahazoana toky fa hitohy hikoriana ny rano mandritra ny fotoana fidiovana .
(src)="4.4"> Notsinjaraina araka ny fampiasàna azy ny rano .
(src)="4.6"> Miaraka amin 'ny fahaizana amam-pahalalàna ary ny fandraisana andraikitra , dia ovàntsika ho helo hatrany ny tany iainantsika , .
(src)="4.8"> Mampahafantatra i Abha Midha :
(trg)="6.6"> သုံးစွဲ ​ ခြင်း ၊
(src)="4.9"> Ao India , nitarika fiovàna ara-tsosialy ny Hetsika Sulabh teo amin 'ny sehatry ny fahadiovana. i Dr Bindeshwar Pathak no nanomboka azy , mora vidy ny toeram-pivoahana Sulabh ary vahaolana mitsinjo sy manaja ny tontolo iainana ho an 'ny olona .
(src)="4.10"> Toeram-pantsakàna rano any Patan Nepal .
(src)="4.11"> Sary avy amin 'ny pejy Flickr an 'i Wayan Vota .
(src)="4.14"> Manazava ny olana momba ny rano any Nepal i Bhumika Ghimire :
(src)="4.15"> Mifandraika mivantana amin 'ny fahasimbàn 'ny tontolo iainana any Nepal ny olan 'ny rano .
(src)="4.16"> Any Kathmandu renivohitra , faritra maro no tsy mahazo rano 6 andro isan-kerinandro , ka voatery , na mividy rano amin 'ireo mpivarotra , na mionona amin 'ireo lava-drano sy renirano izay tsy voaara-maso ny hadion 'ny rano ao aminy .
(src)="4.17"> Namoaka sary mampiseho ny fifandraisan 'ny rano amin 'ny fiainantsika andavan 'andro , i Ujjwal Acharya .
(src)="4.18"> Pakistana :
(src)="4.19"> Na dia niharitra ny tondra-drano ratsy indrindra tao anatin 'ny zato taona aza i Pakistan , maina ary miha-karankaina ny faritra sasany ao aminy .
(src)="4.20"> Manamarika i Khalida Brohi , ankizivavy teratany avy any Balochistan any Pakistan fa ireo olona teratany foana no voadona mafy indrindra amin 'ny fiovaovan 'ny toetr 'andro :
(src)="4.21"> Niova tsikelikely izao ny fombam-piaina nentin-drazana Balochistan sy ny fampiasàna ny tany ho fambolena .
(src)="4.22"> Miova ireo fomba fambolena roa Khushkaba sy Sailaba , tsy mety ny fanao mahazatra manisy tatatra hampiasàna ny rano tamin 'ny tondra-drano ho an 'ny tany fambolena satria niova làlana ny rano tondraka , sady izao na ny fahaizana ambony indrindra aza tsy afaka mamantatra hoe aiza no hisy tondra-drano , raha fitahiana ho an 'ireo mponin 'ny lemaka any Baluchistan ny tendrombohitra taloha , lasa loza manimba kosa izany ankehitriny .
(src)="4.23"> Lava-dranon 'i Marvi any an-tanànan 'i Tharparkar , tany efitra any Sindh .
(src)="4.24"> Sary avy amin 'ny pejy Flickr an 'i Kashif .
(src)="5.1"> Jalal HB , ao amin 'ny Fire Within , dia manoratra momba ny tsy fahampian-drano madio any amin 'ny tany efitr 'i Thar any amin 'ny faritr 'i Sindh :
(src)="5.2"> Rehefa avy ny orana dia angonina anaty fitoeran-drano somary iva , somary boribory antsoina hoe “ tobas ” ary miara-misotro eo ny olombelona sy ny biby .
(src)="5.3"> Tsy misy hevitra ankoatr 'izay satria tsy azo atao koa ny mandàvaka .
(src)="5.4"> Na dia misy aza ny fahombiazana , malanilany sy masira loatra ilay rano ka tsy afaka hosotroina amin 'izao fotsiny .
(src)="1.2"> Tamin ’ ny volana Jolay lasa teo , vondrona mpianatra Maraokana nampahafantra pejy Facebook antsoina hoe “ Ny Firasain ’ ny Mpianatra Maraokana Mba Hanova ny Rafi-pampianarana ” ( Fanafohezan-teny amin ’ ny teny frantsay : UECSE ) .
(src)="1.3"> Fitambarana tanora Maraokana ny vondrona izay mikendry ny “ hirotsaka an-tsehatra , sy hiadihevitra momba ny vahaolana mahomby ho fanatsarana ny rafi-pampianarana ” .
(src)="2.1"> Tao anatin ’ ny iray volana latsaka , mpikambana miisa 10 .
(src)="2.2"> 000 no liana tamin ’ ilay pejy Facebook ary maro ny fanohanana tao amin ’ ny fampahalalam-baovao sosialy .
(src)="3.1"> Nanjary niha-mafy ny hetsika noho ny vaovao avy amin ’ ny governemanta izay milaza fa hakarina ny saram-pisoratana anarana eny amin ’ ny oniversitem-panjakana .
(src)="4.1"> Niantso ho amin ’ ny fanentanana manerantany tamin ’ ny Alahady 6 Aogositra 2012 teo ny vondrona , mba “ handrisika ny fiarahamoni-pirenena sy ny mpanao politika Maraokana hanokatra adihevitra nasionaly mikasika ny fepetra tokony horaisina momba ny fanovana ny rafitra . ”
(src)="5.1"> Nalefa tamin ’ ny fampahalalam-baovao sosialy ny antso .
(src)="6.1"> Taminà lahatsary iray tao amin ’ ny Youtube izay nalefan ’ ny vondrona talohan ’ ny hetsika , niantso ho amin ’ ny fanovana ifotony ny rafi-pampianarana ny mpianatra .
(src)="6.2"> “ Mila hovaina tanteraka ny rafi-pampianarana , ” hoy ny mpianatra iray naneho hevitra tamin ’ ny lahatsary .
(src)="6.3"> “ Mila ravàna tanteraka sy havaozina hatramin ’ ny voalohany indray ny rafitra , ” hoy kosa ny mpianatra iray hafa .
(src)="6.4"> Maro tamin ’ ireo mpianatra niseho tamin ’ ny lahatsary no tsy nankasitraka ihany koa izay lazain ’ izy ireo hoe “ fepetra tsy mandrisika ( démotivante ) ” apetraky ny Sekoly Ambony an ’ ny mpanankarena , indrindra ny fepetra ambony ( volabe ) takiana mba ahafahana mifaninanana amin ’ ny fanadinana hidirana ao amin ’ ilay sekoly .
(src)="7.1"> Ny andron ’ ny hetsika , mpianatra an-jatony sy ny ray aman-dreniny no namaly ny antso araka ny hita ao amin ’ ny sary sy lahatsary nalefa sy naparitaka tamin ’ ny aterineto .
(src)="8.1"> Sary nalefan ’ ilay mpisera Flickr Hassan Ouazzani kosa mampiseho ireo teny filamatra isan-karazany tsy mankasitra ny kolikoly , ny fanomezana tombotsoa tsy ara-drariny ( favoritisme ) , ny faharatsian ’ ny fotodrafitrasa sy ny fepetra henjana apetraka amin ’ ireo mpianatra hiditra amin ’ ny fianarana ambony :
(src)="9.1"> Niantso ho amin ’ ny fanovana ny rafi-pampianarana ny mpianatra Maraokana- Sary avy amin ’ i Hassan Ouazzani – nahazoana alalana
(src)="11.1"> Niantso ho amin ’ ny fanovana ny rafi-pampianarana ny mpianatra Maraokana- Sary avy amin ’ i Hassan Ouazzani – nahazoana alalana
(src)="14.1"> Nilamina tsara ny hetsika .
(trg)="11.2"> ဟာဆန် အောဇန်နီ ၏ ဓာတ်ပုံ ၊
(src)="14.2"> Nanome teny ny vondrona fa mbola hikarakara hetsika vaovao sy latabatra boribory manerana ny firenena .
(src)="15.1"> Tao amin ’ ny Tumblr , hoy ny UECSE nanoratra :
(src)="15.2"> Nitaky rafi-pampianarana mahomby ny MPIANATRA tanora , MPIANATRA MARAOKANA izy ireo , leo ny zava-misy ankehitriny , vonona hitondra fanovana ny hoaviny izy ireo sy hantanteraka ny nofinofiny , manomboka ny fikasana tsara faobe
(trg)="13.4"> သူတို့အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲပြီး အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ် ၊
(src)="1.1"> Malezia : Nampanantena Ny Hijery Ny Lalàna Momba Ny Sivana Amin 'ny Tranonkala Ny Governemanta Taorian 'ny Fanoherana
(src)="1.2"> Navaozina ny 18 / 8 / 2012 : Miaro ny tovana natao tami 'ny andininy 114A amin 'ny Lalàna momba ny Porofo ny Kabinetra .
(src)="2.1"> Tamin 'ny 14 Aogositra 2012 , Maleziana an 'arivony no nandray anjara tamin 'ny fanoherana tety anaty aterineto ilay Andinin-dalàna 114A navoaka vao haingana , fanitsiana iray ho an 'ilay lalàna izay heverin 'ny maro fa fanohintohinana ny fahalalahan 'ny aterineto .
(src)="3.1"> Bilaogy noforonina manokana ho an 'io resaka io no nampiseho amin 'ny antsipirihany ny mety ho fiantraikan 'io lalàna io amin 'ny Maleziana :